Imibuzo mayelana uthando nobudlelwano
Naphezu ukuthuthukiswa isiyonke ohlangothini lwezobuchwepheshe impucuko, abantu KUYA kuba nzima ukuthola ukuxhumana nabanye. Minyaka yonke siyanda isibalo amanothi izinhliziyo enesizungu. Lokhu kwenzeka ngenxa yezizathu ezihlukahlukene: abanye umsebenzi umatasa, umuntu manqikanqika ezahlukene. Ngezinye izikhathi kukhona isimo ukuthi umfana intombazane wahlangana futhi abazi ukuthi yini imibuzo ukubuza mayelana nothando kungenzeka. Ngenxa yalokho, kukhona uvale umlomo. Futhi, ngoba abantu abaningi kuba yinkimbinkimbi ngabanye ukuxhumana nge-Internet njengoba imiyalezo nomkhawulo bezibona ngokomzwelo.
Imibuzo mayelana uthando Kuqakatheke?
Ngokuthakazelisayo kukhona udaba oluthile, kunzima ukunquma kusengaphambili. Umuntu ngamunye uhlukile. Kukhona imithetho ethile yokuziphatha. Ngokwesibonelo, lokho kubhekwa njengokuzijabulisa ukudelela ukubuza ladies ubudala noma ezingeni inkokhelo. Kukhona umbono ukuthi akusiyo ewundabuzekwayo izihloko siqu lapho ukuhlangana nabantu abasha. Kungani? Ngenxa yokuthi imibuzo guy ngothando ngezinye izikhathi kubonisa ukungaqiniseki yakhe noma isitatimende. Futhi kukhona nezindaba ezingase ukucasula abantu. Okokugcina ikakhulu for amantombazane.
Eziningana "cha" wobulili fair
Akubona bonke ngothando intombazane, imibuzo engase ibuzwe. Ngokwesibonelo, ungaceli bangaki abafana ayenakho. Othanda nentshisekelo esikhathini esidlule? Futhi kunzima kakhulu ngumbono omuhle kakhulu - ukuqala imibuzo yakhe mayelana nokuthi ubani kungcono - wena noma ex-isoka. Iba okungcono wakhe, nabo bonke!
Ungazami ukuntela kwi "labo" izinsuku. Ukuphazamiseka kwemizwa nokubi bonke abantu, futhi khona zokwehlukaniswa lapha ngeke luxazulule lutho. kwesokudla Better ukubuza ukuthi ukhiyele futhi Angers.
inani elikhulu abalingani owesifazane olwamukelekayo emphakathini wethu, ngakho-ke akanandaba yena ukuthi mangaki amadoda bekuya kuwe. Wena wafaka wakhe sesimweni ungakhululekile, okungenzeka ukuthi kudalwe ukuba aqambe amanga.
abangane Hlukanisa kanye intombazane. Ungafuni ukuboleka imali yakhe ngoba ubhiya noma chips. Naphezu ukulingana nama-akhawunti kwesigaba ngesikhathi cafe, le ndlela ibulala ubudlelwano.
Akubalulekile ukubuza imibuzo mayelana isisindo. Bambalwa ladies asabele kanjani kulokhu nge ingcosana amahlaya (isib, aphendule: "Bheka, ngiyakukwenza ukuba akuqede"). Kunalokho, ukholelwa ukuthi isho ukuphelela kwalo futhi wacasuka.
Ungazami nomkhawulo walo. Ingabe kukhona amantombazane nezintombi, abangane, izihlobo. Imizamo bawasuse ukuphila kwakhe ngeke zifeza okuhle. Zama ukwenza abangane nabo.
Uma owesifazane ecasukile ngokuthize, noma ngithukuthele, ungaceli yena lapho uthulisa phansi. umbuzo onjalo ungabangela nje ukuphendula okuphambene: anda kwemizwelo engakhi.
Ekugcineni, ungazami ukubuza uma intombazane akafuni ukushintsha ikhabethe lakho. Ngisho noma ukuthole kakhulu nekhululekile, ukuphoqelela intando yabo - umbono ongalungile. Lokhu kuyomane kuholele amahlazo.
Kahle izikhungo amaziyo - isihluthulelo ubuhlobo uzinze. Amadoda amaningi kunzima ukuqala ukuxhumana nabobulili fair. Ngokuvamile, ngelutsandvo imibuzo intombazane zingahlukaniswa ngamaqembu amabili: okuthusayo umongo. Ngenxa ukususwa iqembu zafika okokuqala Intombazana evela isimo nokuzola. Ngenxa yalokho, ngaphambi iwundlu nabanomusa. Iimbonelo zemibuzo enjalo: nikwazi ukupheka isobho? Futhi ngubani kangcono - Trump noma Obama?
Ukubuza kubo amantombazane ezingajwayelekile kangcono, njengoba umphumela ukumangala wadala. Kodwa umngane oseduze nezindaba ezifana kungakuphatha kabi. Kukhona isimo esicishe sibe stupor uRips off imaskhi yomuntu, okwenza kuye esilalelayo futhi emnene. Kubalulekile ngokushesha ukuhlola ezingaba kumngane. Empeleni wakha uchungechunge elula: wazi indlela ukupheka isobho? Pheka ukungithathela wona? Siyaqhubeka amaziyo kwethu. Kulula Ngakho ukuthola umlingani okwesikhathi emihlanganweni wabeka-back ezingaba kamuva eyaba okungaphezu kwalokho.
Umuntu ngamunye kwasekuqaleni self ezithakazelisayo. Yimiphi imibuzo engase ibuzwe mayelana uthando intombazane? Iphathelene uqobo. Ngokwesibonelo, ungabuza wakhe uma engekho ongusomabhizinisi, noma yena uthanda uma ongaphansi kwakhe. Kulesi simo, into esemqoka - Ungeqisi it (akudingekile temphendvulo ngamunye ngokuvumelana Unqekuzisa ikhanda ikhanda lakho futhi uthi, "Indlela kuhle!"). Ngakho ukusebenzisa ubungozi uphawu isiphukuphuku futhi henpecked.
Imibuzo mayelana nobudlelwano nothando kungcono ukucela esekelwe isimo. Ngokwesibonelo, uma intombazane zehla emgwaqweni ebusuku, cela uma yena uthanda ukuthi izibani zasedolobheni ebusuku futhi injabulo. Bese - uma eseneminyaka lihlongandlebe. Ngakho ufinyelela umgomo oyinhloko: ukuheha ukunakwa.
Ungaqala nge sicasulwa: "Ngaphambi kuyinto guy enhle kunazo zonke emhlabeni futhi sokumazi?" Noma: "Uyathanda ukunikeza uziveza ukunikeza?" Ngakho unganquma kanjani ukuthi indlela uninhibited intombazane futhi yini ubunjalo baso.
"Akunakwenzeka" ngoba amadoda
Kunengqondo ukuphetha ngokuthi imibuzo guy ngothando - yini lula? Kodwa ngisho lapha it has izici zayo siqu nezihibe. I ubulili fair kumele ukwazi kunoma isiphi isimo akunakwenzeka ukubuza namasoka abo. Ngokwesibonelo, njengoba umbuzo zabesifazane ozithandayo, "Uyangithanda na?" ezimbi. Yini? Kulo lusuka uhlamvu usawoti. Kuyefana nasendleleni umbuzo "Ngabe ucabanga manje?". Ngakho you epha guy baqonde ukuthi uzizwa nesithukuthezi. I kuwukusabela okungokwemvelo kulokhu - ukucasuka.
Akubalulekile ukubuza mayelana nenani abalingani. Phela, impendulo akunakwenzeka ukuba ezikufanelayo. Asikho isidingo ubheke esidlule ngoba kakade sekuye, futhi akunandaba mqondo ngaye sinamathele.
Akubalulekile ukubuza "Nginalo yini lokhu isiketi kuyaqhubeka?" noma "Ingabe kufanele ukugqoka lokhu umgexo?" - ngakho kubonisa yokungazethembi wakhe. Ikesi Man - Admire ukubukeka izintokazi, ngakho-ke asikho isidingo ngomkhumbi imininingwane yakhe ikhabethe.
Omunye umbuzo ecasulayo: "Ngubani ngaphezulu:? Kimi noma umama wakho" Akubalulekile ukubeka umuntu engalokothi ubhekene nesinqumo - kungase kube umphumela hhayi umusa wakho. Akunconyelwe ngentshiseko ukuqapha lapho ukubukela indoda yakho nokuthi bayinikela kubani. He is kakade nawe, yini okudingeka wena?
nezindaba zabesifazane ngoba amadoda
Yimiphi imibuzo engase ibuzwe uthando umfana? Cishe noma ubani. Ngokuvamile, kufanele ngamaqembu amabili amakhulu: ukuhlolwa kanye yokuqinisekisa. Kuye izimpendulo ayenginika kwenza iziphetho mayelana indoda. Ngokwesibonelo, umuzwa angajwayelekile of amahlaya ukudlala kuphela ezandleni. Umbuzo "Usebenza kuphi?" ungakwazi ekushaya indiva futhi bathi umenzeli Undercover, kodwa akwaziwa ukuthi waphelelaphi. Into esemqoka - musa kube impendulo namahloni yokuqala njengoba izimpendulo angajwayelekile bakhange amantombazane.
Zama ukusebenzisa ejwayelekile izifanekiso nezindaba. Buza mayelana uthando kuqala ukuthi izwi kwakusho kuye, nokuthi kusebenza kanjani ukuthandana nomuntu wobulili obufanayo, nokunye. N.
Sekuyisikhathi eside futhi ngokuqinile Inthanethi esungulwe ekuphileni kwansuku zonke. Ziningi ukuphola sites kanye nezingosi zokuxhumana nabantu baye yaba undab 'uzekwayo abantu babo bonke ubudala. Ngakho-ke, la mantombazane kusesho umbhangqwana akudingekile ukuze uchithe kuwebhu ebonakalayo. Kodwa lokho imibuzo ukubuza a guy ukuxhumana mayelana nothando? It kuncike injongo. Ngokwesibonelo, ukuze akhe ubuhlobo obuseduze kungaba ngimbuza uthanda sunbathe nqunu. Ngakho, wamsiza ngomusa ukudumisa umzimba wakhe. Njengoba zothando ubuze, "Kuthiwani ingxenye kimi UCABANGA eziyengayo kakhulu" Ngemva ndima esinjalo kuphela umfana ezingavamile ngeke ubuyekeze izithombe zakho.
Uma intombazane ngifuna ubuhlobo benethemba emshadweni, khona-ke kubalulekile ukuba bangabuyeli ingxoxo 'ingxoxo'. Ngakho-ke, imibuzo mayelana uthando akudingeki ukuba yisicefe futhi banal. Ngamunye ukuze asindise ukuphila kwakhe kuhle ukungicika imibuzo efana "Wenzani, lapho usebenza, kwenzekani empilweni yakho?". Ukuxhumana kungcono ukuqala isithakazelo okungezona awayiphazamisi, isibonelo, ukuze ufunde umfana ukuhweba, sokumbuza ngisho nombuzo kulesi sihloko. Noma, ngokwesibonelo, wabona isithombe kuye nge ikati, cela indlela yokunakekela le isilwane. Zizwe ukhululekile ukusebenzisa umcabango: "Ngikubone ebhasini ngoLwesibili?" Okubalulekile lapha akuyona impendulo, futhi inkinga yokuxhumana.
nixoxa ngokukhululekile ngalezi zindaba
Buza imibuzo mayelana uthando umfana lekutsatfwa ngayo ucansi, kodwa musa eqise, ngoba kulula beqa umngcele futhi kubonakale njengendlela intombazane zobuhle lula, noma eduze. Ubokhumbula njalo-ke ikhono lokungacasuli. Akubalulekile ukubuza mayelana kangakanani ayenakho abalingani, bese unsinsitheka mayelana impendulo. Kungcono ukuba ayibuze ayenakho ukuba nobuhlobo obungathi sina, wakhumbula kubo bonke. Ungakwazi ngobumnene ukubuza Ithanda ngokuya obuseduze. Ungakhohlwa ukwabelana fantasies zakho kule ndaba.
Imuphi umbuzo intombazane iqhinga ngothando futhi ngempilo, ungacela? Iphuzu eliyinhloko ukuthi asikwazi ngokushesha waphendula. Ngokwesibonelo, omunye ingathanda ukulondoloza uma kunengozi yomlilo: ikati, umntwana, unina? Noma kwawo nesihloko izakhi lobugebengu emphakathini. Njengoba inketho, "Ingabe kufanele usebenzise uhlaka enkulumweni yansuku zonke?" Okwakushiwo ezindabeni ezinjalo - ukubamba ntombazane ukumangala, wayengenakukwazi ukuphendula ukuthi ngokushesha. Zingaba Kuyahlekisa lokhu, "Wenzenjani Songa amasokisi? Uyakholwa ukuthi umshini wokuwasha amasokisi sikagesi "futhi sina:" Ingabe ikhona impilo emva kokufa na? Ukuthi izihlahla bayakwazi ukucabanga? Ukuhlala amatshe Ingabe? "Nokunye .. Iningi lazo aluhlaza cwe. Kodwa ungakhohlwa ukuthi engxoxweni emnandi ungavula kubo.
Amanye amathiphu jikelele
Lapho umuntu ekhetha imibuzo ukubuza mayelana uthando, noma ubulili, yena nezingozi turning ingxoxo ibe ukuhlonywa imibuzo. Ngakho qiniseka ukuthi ake izwi enye inhlangano ukuze Ungaphinde ucele into. Zama ukukwazi izikhathi ezithakazelisayo wenhlanhla. Okuningi bayazidlalela, tshela amahlaya - kuhle aqede wonke umuntu akhululeke. Ngaphambi kokubuza imibuzo guy ngothando futhi maqondana, faka sifuba sakhe. Angakwazi ugxumele lokuqala - akukho okubi ngalokho. Akubalulekile nje ukuhambisa umugqa omncane phakathi izithakazelo indoda nokuphikelela. Khumbula ukuthi amanye amadoda kungenziwa uyazithulela taciturn, futhi badinga isikhathi ukujwayela abantu.
Umehluko omkhulu phakathi amadoda esuka abesifazane: wobulili namandla kufanele inikwe khuluma ngokugcwele. Abasoze alivume, kodwa ulinde ngasese ngoba lokhu kusukela amantombazane. Phatha ingxoxo njengoba umdlalo we-chess: ungakwazi engamakhulu hhayi amaphesenti landulele izenzo isitha, futhi kubalulekile ukugcina zigciniwe izinyathelo ezimbalwa ngaphambi. Lokhu kusebenza ingxoxo - ungeke ukwazi ngobuciko izimpendulo okungalungile, ngakho-ke, akunakwenzeka kusengaphambili ukuba silungiselele imibuzo efanele.
Kubalulekile ababonisa isithakazelo esiqotho engxoxweni. Kuphela indlela enjalo yokuhlaziya isimo kwenza kube nokwenzeka ukuba uvule ingxoxo umuntu ngokuphelele. Khumbula ukuthi uma ukuqhuba ingxoxo uhlu ngaphambilini walungisa imibuzo, uzakwethu uyozizwa ke, futhi ngeke esebenza kuwe omuhle.
Kokuphazamisa umuntu iluhlaza. Ngakho-ke, ake enye inhlangano ukukhuluma ngokugcwele. Kubalulekile ukuthola isihloko asithandayo, futhi lo muntu ngeke kube nzima ukuthuthukisa ke. Kokuphazamisa umuntu ekhipha ngayo imicabango kanye ucime isifiso sakhe ukuxhumana.
Ubuciko ukuqhuba ingxoxo nganoma isiphi isihloko kudinga umkhuba njalo. Ngakho-ke ewusizo ukuxhumana nabantu abaningi, bese ngenxa nesipiliyoni anqwabelene ngeke kube nzima ukukhetha elilodwa noma olunye udaba.
Zothando - kunjani? Imibuzo kunazo ukuphokophela mayelana romance
Indlela ukushintsha igama ku-Facebook
Zellweger syndrome: incazelo, izimbangela, izimpawu kanye nezici ukwelashwa
U-Abramovich Olya - intombazane edumile ngenxa yesithombe "ku-Instagram"
Ukugeza umshini ngaphansi echibini: nenqubo yokukhethwa, amanani, ukubuyekezwa kanye nezithombe
Emhumeni Siagne eduze eMoscow